के तपाईंलाई थाहा छ ? हाम्रै खराब बानीले बिग्रिन्छ आँखा !
आँखा हाम्रो शरीरका संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण अङ्गहरूमध्ये एक हो ।
त्यसैले आँखालाई सधैं ध्यान दिनुपर्छ । थोरै पनि लापरवाही आँखाको लागि हानिकारक हुन सक्छ । हामीले जानेर होस् या नजानेर, यस्तो बानी अपनाउँछौं जसले हाम्रो आँखालाई असर पुर्याउँछ । यदि तपाईंको तल उल्लेख गरिएका मध्ये कुनै खराब बानी छ भने सुधार गर्नुहोस् । अन्यथा तपाईंको आँखा छिटै बिग्रिन सक्छ ।
आँखा बिग्रनु अथवा कमजोर हुनुका लक्षण यसप्रकार छन् :
एकभन्दा बढी देखिनु
आँखाबाट आँसु आइरहनु
आँखामा पीडा हुनु
यदि तपाईंलाई चस्मा लगाउनुपर्ने भएको छ भने अनिवार्य लगाउनुहोस् ।
उज्यालो ठाउँमा मात्र पढ्ने, मोबाइल, कम्प्युटर आदि चलाउने गर्नुहोस् ।
कम्प्युटर, ल्यापटप आदिलाई ठीक दूरीमा राख्नुहोस् ।
आँखामा सुख्खापन भएमा ल्युब्रिकेशन भएको आइड्रपको प्रयोग गनुुहोस् ।
कम्प्युटरमा धेरै समय काम गर्नुपर्ने छ भने हरेक १ घण्टामा उठेर केही बेर टहलिने गर्नुहोस् ।
कम्प्युटर, ल्यापटप चलाउन बस्दा सजिलो आसनमा बस्नुहोस् ।
बस्दा सधैं एकै तरिकाले नबस्नुहोस्, बेलाबेलामा बस्ने तरिका बदल्नुहोस् ।
कम्प्युटर चलाउँदा हरेक घण्टामा २ मिनेट आँखा बन्द गर्ने गर्नुहोस् ।
प्रविधिको यो युगमा मोबाइल, ल्यापटप र कम्प्युटरविना हामी केही छिन पनि रहन सक्दैनौं । यी ग्याजेट्स हाम्रो जीवनको अभिन्न अङ्ग नै भइसकेका छन् । तथापि, आफ्नो स्वास्थ्यलाई ध्यान दिँदै यी वस्तुको प्रयोग सीमित गरौं र यसबाट निम्तिन सक्ने समस्याप्रति सधैं सजग रहौं ।